यस पालिको तिहारमा अशोक दर्जी आफ्नो घर झापा नजाने , कारण यस्तो रहेछ ! - Nepali News Portal
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १२:४८
यस पालिको तिहारमा अशोक दर्जी आफ्नो घर झापा नजाने , कारण यस्तो रहेछ !
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १२:४८ November 8, 2018 Ajako SamacharUncategorizedNo Comment on यस पालिको तिहारमा अशोक दर्जी आफ्नो घर झापा नजाने , कारण यस्तो रहेछ !
केहि समय पहिले निकै नै भाईरल भएका बाल गाएक अशोक दर्जीको घरमा यसपालिको तिहारमा झकि झकाउ भएको छ । तिहारको लागि भनेर नै टंक बुढाथोकीका दाई टिका राम बुढाथोकी अहिले झापा गएका छन। त्यस्तै अशोकको घर हेर्न आउनेको संख्या पनि बढ्दो छ । देश तथा बिदेशमा रहेर अशोक लाई नियाली रहेका मानिसहरु अहिले चाडपर्वको अवसरमा नेपाल आएको बेला , अशोकको घरको पनि अवलोकन गरेका छन।
अशोक दर्जीको घर झापामा सबै भन्दा राम्रो देखिएको छ भनिएको छ । यी सबै झिलिमिली अशोक दर्जीको घरमा हुँदै गर्दा अशोक भने यसपाली तिहारमा झापा जान नपाउने भएका छन। वरिपरी बातावरण झिलिमिली हुँदै गर्दा अशोकको परिवारमा भने निराशा छाएको छ । अशोक यसपाली तिहारमा घर न आउने भए पछी अशोकको घरमा निराशा छाएको हो।
बाल गाएक अशोक दर्जी , झापामै जन्मिएर सडकमा गित गाउँदै गर्दा डिजे रुपक सापकोटाले भिडियो खिचे पछी, गाएक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीले उनको स्वरमा गित रेकर्ड गराएका थिए। उनको पहिलो गित मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मनले सर्वाधिक चर्चा कमाए पछी उनको चर्चा झन् चुलिएर गएको हो ।
त्यस्तै अहिले अशोक दर्जी , टंक बुढाथोकी र ए आर लाई कार्यक्रमको भ्याई नभ्याई भएको छ । भर्खरै पश्चिममा दाङ देखि पूर्वमा फिदिम सम्मको कार्यक्रम सकाएर गाएक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकी दुवै गएका थिय !
हेर्नुस आज २२ गते बिहिवारको राशिफल, कस्तो छ त आजको हजुरहरुको दिन !
निर्मला पन्तको आत्मा सान्तिको लागी भय पनि यो दिपावालिमा दियो बालिदिनुहोला !!